खुदरा व्यापारको अर्थ के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki खुद्रा व्यापार
एक खुदरा व्यापार के हो?
मानकीकृत खुदरा बैंकिंग व्यवसाय
जब खुद्रा व्यापार बैंकहरू मानक वित्तीय उत्पादनहरू र ठेकेदारहरूसँग काम गरिरहेका छन् जो मार्केट बजारका लागि अनुकूलित हुन्छन् र अन्त उपभोक्ताहरू अनुरूप छन्।
मान्य उत्पादनहरूमा अन्तिम प्रयोगकर्ताको लागि छिटो प्रशोधन र पारदर्शिताको लाभ छ। बैंक शाखाको प्रत्येक क्लाइन्ट सल्लाहकारले यस प्रकारलाई ग्राहकलाई तुरुन्तै उनीहरूको चाहना र आवश्यकताको लागि उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्षम छन् र, यदि आवश्यक भएमा एक सहमति समाप्ति गर्न।
यसका लागि आफूलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग गर्न, प्रस्तावहरू साथसाथै यी मानक उत्पादनहरूमा बनाइन्छ, जुन तपाइँलाई, अन्तिम प्रयोगकर्ता वा थप लाभ दिनुपर्छ। बैंक नयाँ ग्राहक बोनसहरू छन् वा अन्य मानक उत्पादनहरू भन्दा राम्रो नियमहरू छन्।
रिटेल व्यवसायले ग्राहकहरूलाई मध्य वा अपेक्षाकृत कम आय संग बुझाउँछ। यस क्षेत्रमा अमीर वा कर्पोरेट क्लाइन्टहरू प्रतिनिधित्व गरिएका छैनन्। निजी बैंकिंगले धनी ग्राहकहरूसँग व्यापारलाई बुझाउँछ, व्यक्तिगत समाधान प्रदान गर्दछ र यसैले रिटेल बैंकिंगको विपरीत हो।
रिटेल व्यवसायको लागि वितरण च्यानलहरू, बैंकहरूले बैंक शाखाहरूको घोर नेटवर्क प्रयोग गर्छन्। ग्राहक सल्लाहकारहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् किनकि तिनीहरू ग्राहकहरूलाई बैंकको प्रतिनिधित्व गर्छन्। तिनीहरूले ग्राहकको आवश्यकतालाई प्रतिक्रिया दिन्छन् र उत्पादन दायराबाट मानक समाधान प्रदान गर्छन्। यसबाहेक, वितरण वितरणको रूपमा इन्टरनेट दैनिक आधारमा महत्त्वपूर्ण बनीरहेको छ, किनकि अन्त प्रयोगकर्ताले घरमा सजिलै थप फेला पार्न सक्दछ र अनलाइन मानक अनुगमनहरू समाप्त हुन सक्छ।
एक राम्रो काम गर्ने सेवा केन्द्र खुदरा बैंकिंग को सफलता को लागि एक आवश्यक छ। मार्केटिंग र उत्पाद व्यवस्थापन सेवा केन्द्रको भाग हो र अन्तिम प्रयोगकर्ताको लागि मानक वित्तीय उत्पादनको बारेमा सफल विज्ञापन र व्यापक, सजिलो बुझ्न जानकारी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
त्यस्तै गरी, सफल रिटेल व्यवसायको लागि राम्रो ब्याक अफिस आवश्यक छ। यी उदाहरणका लागि, क्रेडिट विश्लेषक र जोखिम विशेषज्ञहरू समावेश छन्। तिनीहरू मानक वित्तीय उत्पादनहरूको अनुकूलन र अनुकूलन सुनिश्चित गर्छन्।
रिटेल व्यवसायमा विभिन्न क्षेत्रहरू
एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र दायित्व व्यवसाय हो। यदि तपाईं आफ्नो केहि पैसा बचत गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाई प्रायः सामान्य बचत खाता वा पैसा बजार खाता प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यी र अन्य खाताहरू, सेवानिवृत्ति खाताहरू, खाता र समय जम्मा खाताहरू जाँच गर्दै, दायित्व पक्षको भाग हो। आंशिक वे भुक्तान लेनदेनको लागि शर्त हो। बैंक कार्डहरू र लकरहरू पनि निष्क्रिय व्यवसायमा छन्।
उधार र वित्तपोषण व्यवसायले पैसाको उधारोमा लगाउँछ। ग्राहकहरु द्वारा निवेश को लागी धन को बैंक द्वारा व्यक्तियों या कम्पनीहरु को ब्याज दर मा ऋण को रूप मा तर्जू को रूप मा छ। यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। अन्य उत्पादनहरूमा भण्डार, पट्टि र निर्यात वित्त समावेश छ। उधार र वित्तपोषण व्यवसाय खुदरा बैंकिंग को लागी आय को मुख्य स्रोत हो।
सबै बिलहरूको एक ठूलो अनुपात अब नगदमा भुक्तान गरिएको छैन, तर पुस्तक-पैसा ट्राफिक मार्फत बुक गरिएको। यो पोष्टिङ प्रक्रियाको लागि भुक्तानी लेनदेन क्षेत्रमा सबै लेनदेनहरू छन्। यी प्रक्रियाहरू SWIFT नेटवर्क मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोडिएको छ। प्रशोधन पूर्ण रूपमा स्वचालित छ।
निरन्तर कम ब्याज दर नीतिको कारण लगानी लगानी बढ्दै जान्छ। पैसा, जुन तपाईले एक सामान्य बचत खातामा लगानी गर्नुहुन्छ, सानो आय ल्याउनुहुन्छ। मुद्रास्फीति पनि वास्तविक हानि पुग्छ। त्यसैले केहि बचतकर्ता लगानी व्यवसायबाट अलग रहन्छ। यसमा इक्विटी, कोष, कीमती धातु वा अन्य वित्तीय साधनहरूमा लगानी समावेश छ। खुदरा व्यवसायले मानक उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै सिक्योरिटी खाताहरू।
निष्कर्ष: खुदरा व्यवसायका लागि कर्मचारी, प्रतिनिधि, शाखा सञ्जालहरू र अनलाइन उपस्थिति पनि उच्च लागतहरूसँग सम्बन्धित छन्। यद्यपि, रिटेल बैंकिङ बिना दैनिक जीवन अब सम्भव छैन। अप्टिमाइजेसन बैंकहरू द्वारा एक संतुलित लागत-लाभ अनुपात बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। लागतको बावजूद, रिटेल व्यवसाय बैंकहरूको लागि आयको सबैभन्दा स्थिर र सुरक्षित स्रोत हो।
रिटेल व्यवसायको महत्त्वमा थप जानकारी यस भिडियो लिङ्कमा फेला पार्न सकिन्छ:
अघिल्लो लेखस्वीकृति क्रेडिट
अर्को लेखSCHUFA स्कोरिङ